सानै उमेरमा गर्भवती भएका थिए यी ३ बलिउड अभिनेत्री, उमेर नपुग्दै जन्माएका थिए सन्तान ! – " सुलभ खबर "
सानै उमेरमा गर्भवती भएका थिए यी ३ बलिउड अभिनेत्री, उमेर नपुग्दै जन्माएका थिए सन्तान !
एजेन्सी – निश्चित र उपयुक्त उमेरमा बच्चा जन्माउँदा मात्रै आमा र बच्चाको स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ। डाक्टरहरुको सुझाव मान्ने हो भने एक महिलाले २० देखि ३० वर्षको उमेरको बीचमा बच्चा जन्माउँदा उचित हुन्छ।
डाक्टरहरुले यस्तो सुझाव दिएता पनि हाम्रो समाजमा भने रजस्वला भएपछि बच्चा जन्माउन किशोरीहरु योग्य हुन्छन् भन्ने मान्यता छ। जुन, एकदमै गलत हो। पहिला-पहिला कम उमेरमै बच्चा जन्माउने गरिएता पनि पछिल्ला समयहरुमा भने उमेर नपुगी गर्भधारण नगर्ने चलन बसेको छ।
डिम्पल आफ्नो समयकी सबै भन्दा हट र बोल्ड नायिका थिइन्। सानै उमेरमा अभिनयमा होमिएकी डिंपलले १६ वर्षकै उमेरमा सुपरस्टार राजेश खन्नासँग विवाह गरेकी थिइन्। पहिलो छोरी ट्विंकललाई जन्म दिँदै डिम्पल मात्र १७ वर्ष थिइन्।